फुलेको आईफोन ब्याट्री म के गर्ने? | आईफोन समाचार
लिथियम-आयन ब्याट्रीमा सब भन्दा साधारण गल्तिहरू मध्ये एक यो हो कि उनीहरू शाब्दिक रूपमा चेसिस स्क्रिनमा उडाउन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। यो ठ्याक्कै के हो यो मलाई नोभेम्बर २०१ in मा खरीद गरिएको आईफोन एक्समा भर्खरै भयो, हामी २०२० मा छौं त्यसैले वारेन्टीले मर्मत कभर गर्दैन।
अहिले नै यस बिन्दुमा प्रश्न खडा हुन्छ: आफै मर्मत गर्नुहोस् वा यसलाई प्राविधिक सेवामा लैजानुहोस्? दुबै केसमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ, आजकल ब्याट्री यति महँगो छैन र सिधा एप्पल SAT मा मोडेलमा निर्भरता यो 55 75 र ​​XNUMX XNUMX यूरो बीच भिन्न हुन सक्दछ। मेरो सल्लाह (तपाइँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ) कि तपाइँ सिधा एपलमा वा यस प्रकारको मर्मतका लागि कपर्टिनो कम्पनीले प्रमाणित स्टोरमा लैजानुहुन्छ।
एप्पल वाचको ब्याट्री कसरी परिवर्तन गर्ने
यस अर्थमा, त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले ब्याट्री महँगो सेवा खोज्न सक्छन् र यो परिवर्तन गर्न वास्तवमा गाह्रो छैन, तर यो खतरनाक हुन सक्छ यदि हामीले गल्तीले यो फुलिएको ब्याट्रीलाई पंचर गर्यौं भने वास्तवमा यो खतरनाक हुन सक्छ। आधिकारिक एप्पल स्टोरमा तिनीहरूले यस प्रकारको मर्मत कार्य गर्दैनन् र समस्याहरूबाट बच्न उपकरण एक विशेष केन्द्रमा पठाइन्छ। यदि ब्याट्री साधारणतया समाप्त भयो भने, तिनीहरूले स्टोरमा यसलाई परिवर्तन गर्छन्, तर फुलिएको ब्याट्रीको अवस्थामा त्यहाँ त्यस्तो विकल्प हुँदैन, ती बाहिर पठाइन्छ।
म भन्छु कि एक अनौपचारिक ब्याट्री छ कि मूल्य को कारण र एक एप्पल स्टोर मा मर्मत लागत को मूल्य को लागी, सल्लाह र हामी के गर्न छ समस्याहरु बाट जोगिन स्टोर मा लगिन्छ। घटनामा जब तपाईंसँग सँधै स्टोर छैन तपाईं आईफोनलाई वेबमा एप्पल सेवा मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ, तर यसको मूल्य १२ युरो छ त्यो 55 75 वा XNUMX XNUMX यूरोमा थप हुनुपर्दछ। हुनसक्दछ कि, यसलाई राम्रोसँग जोखिममा लिनु हुँदैन र यसको लागि, एप्पल स्टोरमा उपकरण लिनु भनेको हो - म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछु - उत्तम विकल्प।
एक आईफोन बिना प्रतीक्षा गर्नुहोस् करीव १ 14 दिन यसले मर्मत गर्न वा अर्को नविकरण उपकरण पठाउन लिन्छ ब्याट्री सूजसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरू छन्। मेरो आईफोन एक्सको रिजोलुसन भएपछि म यसलाई साझेदारी गर्नेछु, कसरी यो अन्त्य हुन्छ भनेर हेर्नका लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » फुलेको आईफोन ब्याट्री म के गर्ने?
मलाई र उही समयमा त्यस्तै भएको छ। तिनीहरू म बाट ब्याट्री प्लस स्क्रीन, € 400 चार्ज गर्न चाहन्छन् !!! के तिनीहरूले तपाईंको लागि समस्या समाधान गरे?
मैले आईफोन मेरो सम्पूर्ण जीवन प्रयोग गरें, त्यसैले म धेरै मोडेलहरू मार्फत आएको हुँ र यो कहिले पनि भएको थिएन कि ब्याट्री अलि अलि बढ्यो, आईफोन ११ का साथ 11 महिनाको प्रयोगका साथ उनीहरूले मलाई भने कि व्यावहारिक हिसाबले काम भएको छैन। , तिनीहरूले मलाई यो फिर्ता गरे, उनीहरूले मलाई भने कि ग्यारेन्टी लागू हुँदैन र यसले अब केहि काम गर्दैन र यदि ती खोल्दछन् भने तिनीहरूले मलाई त्यो सबै खुल्ला दिनेछन् र कुनै केस छैन, त्यसैले मात्र "समाधान "उनीहरूले मलाई दिए कि मैले कुल मूल्यको %०% भुक्तानी गरें ताकि उनीहरूले मलाई एउटा काम गरे जुन एक ब्रान्डको धेरै निराशा थियो जुन सस्तो छैन र दुर्भाग्यवस मसँग धेरै उपकरणहरू छन्।"
आईओएस १.13.6.1..XNUMX.१ अब स्क्रिनले देखाइरहेको हरियो ह्युलाई समाधान गर्न उपलब्ध छ